Zimbabwe Council of Churches kuManicaland Yokurudzira veDzisvondo Kunyoresa Kuvhota
ZCC iri kukurudzira vemakereke akasiyanasiyana kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhota.
Sangano reZimbabwe Council of Churches mudunhu reManicaland, rinoti munhu wese kusanganisira vatenderi vedzisvondo vanofanirwa kunyoresa kuvhota kuitira kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzichaitwa munyika.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Council of Churches, ZCC, Reverand Abel Joseph Waziweyi veAnglican Church, vanoti veruzhinji munyika havafanirwi kuora mwoyo nekusavapo kwemitemo inodiwa nevanhu kuitira kuti sarudzo dziitwe mujekerere. Rev Waziweyi vanoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa murunyararo.
"Isisu sesangano reZCC tiri kutaura zvishuviro zvedu kuti tinoda ma-elections akaita seyi, vanhu vakasiyana siyana vangave maChristians maprivate citizens, mapolitical parties, ma-political candidates, ingave ZEC, media and the judicial courts of law tine zvishuviro zvatiinazvo kuti sarudzo dzedu dzikasachena hadzina zvinozotinetsa mangwana uye hatidi ma candidates anouya achirwisanisa vanhu kana kuvengana. Tinokurudzira maChristu edu vaende nehuwandu hwavo kunovhota, kunyangwe zvatinotarisira muma reforms zvikasabuda vasaore moyo ngavaende chete ikoko kunovhota."
ZCC inoti inoda kuti matare anotonga nyaya kana zvichemo zvine chekuita nesarudzo, atonge nyaya idzi nekukurumidza, uye kuaranga zvakaomarara vose vanoita zvemhirizhonga.
Sangano iri rinotiwo rinotarisira zvakare kuti vatori venhau vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa, uye vachiburitsa nhau dzechokwadi uye kupa mikana yakaenzana kumapato ari kukwikwidza musarudzo.
Nhengo yeCatholic Commission for Justice and Peace, Amai Shean Mukocheya, vanoti vechidiki vanofanirwa kusiya tsika yekushandiswa nevemapato ezvematongerwo enyika mukuita mhirizhonga kana vapihwa zvinodhaka. Vanotiwo madzimai anofanirwa kuramba kushandiswa panguva yesarudzo.
"Madzimai anofanirwa kupinda menezvematongerwo enyika zvine hungwaru, tisingarevi kushandiswa, nekuti kana nyika ikasagadzikana tisu tine vana saka matambudziko anotanga kubata isusu tisu tinomisa misha. Tirimo mumisha ngatikurudzirei vana vedu kuti ikodzero yavo yekuregister kuvhota uye kuita zvakanaka, ngativakurudzireyi vana vedu kuti vasashandiswe nevari kuda kuita seyi pazvigaro, ngavasapihwe doro.
"Chinangwa ndechekuti azive kuti ari kuda kunovhotera chii, ari kuvhotereyi? Zvinomupa sadza here? Ukaona aspiring ari kukupa fodya that candidate isi already out, ari kuda kuita development here, ari kuda kuvaka maroads here? Like zvaiita Joshua Sakko aigadzira maroads ndiyo development yatinoda. Saka isusu vana amai tine basa rekuita apa!"
Mapato ezvematongerwo enyika ari kugadzirira kupinda musarudzo dzekutsvaga makanzura, nhengo dzeparamende pamwe nemutungamiri wenyika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo munyika muine vanhu vakawanda vari kuda kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika, maziso evanhu vakawanda akatarisa pavanhu vaviri vanoti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, pamwe nemutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa.